अन्तिममा रबि लामिछानेको आफ्नै रिपोर्ट किन बजेन ? – Paluwa Khabar
माघ ८, २०७७ बिहिबार 18
चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने न्यूज २४ टेलिभिजनमा अन्तिम कार्यक्रम गर्दै विदा भएका छन् । सो टेलिभिजनमा ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाउँदै आएका उनी आज अन्तिम कार्यक्रम गरेर बिदा भए तर सिधा कुरा टाेलीले आज प्रसारण गर्ने भनेर तयार पारिएको सिधा कुराको आज सम्मको यात्राको रिपोर्ट भने प्रसारण गरिएन। प्रसारण नभएपछि रबिले त्यो सामाग्री आफ्नै आधिकारिक फेसबुक एकाउन्ट बाट पोष्ट गरेका छन् ।
लामिछानेले खुलाए न्युज 24 छाेडनुको रहस्य, अन्त्यमा किन न्युज 24 ले रबिको रिपोर्ट प्रशारण गर्न दिएन?
Prevपाथिभारा माताको दर्शन गरि माघ ९ गते शुक्रबारको राशीफल हेर्नुहोस्
Nextअन्तिममा रबि लामिछानेको आफ्नै रिपोर्ट किन बजेन ?
नयाँ गृहमन्त्रीको खोजी बादलको रिप्लेसमा गौतम ,ओली र गौतमबीच भयो यस्तो गोप्य छलफल